Caafimaadka & Wararka Caafimaadka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Qalabka Caafimaadka - Dulmar guud
Shirkadaha keena dawooyinka waxay door muhiim ah ku leeyihiin warshadaha. Waxay qabtaan shaqooyin badan iyagoo ujeedkoodu yahay sare u qaadista wax soosaarka iyo bixinta xalka tayada iyo qiimaha. Alaab-qeybiyeyaashan ayaa loo kireysan karaa hawlo gaar ah. Alaabada caafimaad waxaa ka mid ah badeecooyin kala duwan oo dhaqtar isticmaali karo ama […]Read More
Raadinta Bixiyeyaasha Daawooyinka Dawooyinka Cudur Raaca
Qiimaha dawada cayriin aad ayey qaali u tahay. Xaqiiqdii, ku dhowaad dhammaan daawooyinka guud waa qaali. Laakiin inta badan daawooyinka cayriin aad ayey u jaban yihiin; mararka qaarkood xitaa waxaa laga heli karaa dukaamada dhexda dhexe qiimo aad u yar. Hadda su'aasha ayaa soo baxaysa, sida looga ogaan karo dawooyinka ceeriin ee raqiiska ah ka ganacsadaha […]Read More